Coronavirus: bangiga Adduunka ayaa ka digay 60 malyan oo qof iney saboolnimo khatar ugu jiraan
Wednesday May 20, 2020 - 12:49:24 in Wararka by Burco Staf
Bangiga Adduunka ayaa sheegay cudurka coronovirus ee dunida ka dillaacay uu sababay ilaa 60 malyan oo qof iney galaan "saboolnimo aad u daran."
David Malpass wuxuu sheegay dhaqaalaha dunida inuu hoos u dhaca 5% sanadkan xilli ay dalalku la daalaa dhacayaan cudurkan safmarka.
Wuxuuna cudurka uu durbadiba sababay iney malaayiin qof ay shaqooyinkooda ku waayaan ganacsiyo badanna ay xirmaan, xaaladda waddamada saboolka ah haba ugu sii darnaatee.
"Noolasha malaayiin qof ayaa burbrtay sida oo kale wuxuu cadaadis xooggan uu soo fuulay adeegyada caafimaadka caalamka" ayuu yiri.
"Qayaastannadu waxay tahay ilaa iyo 60 malyan oo qof iney galeen saboolnimo aad u adag, taasoo gabi ahaanba meesha ka saareyso dadaalladi looga jiray dhimista saboolnimada ee seddexdii sano ee ugu dambeeyey dunida ka socday" ayuu yiri Mr malpass oo talaadadi digniin soo jeediyey.
"Ruux kasta oo Muqdisho ku dhinta waxaan ka baareynaa calaamadaha coronavirus"
Haweeney sheegtay in coronavirus uu nafteeda badbaadiyay
Laba goor makugu dhici karaa coronavirus?
Bangiga Adduunka oo micneeyey "saboolnimada daran" ayaa ku sheegay dadka uu maalinti dakhliga soo galo uu ka hooseeyo $1.90 doolar.
Shirkad deymaha bixisa uu fadhigeedu yahay Washington ayaa sheegtay iney bixineyso $160 balyan oo doolar oo dulsaarka saarana uu yar yahay oo wax looga qabanayo waddamada saboolka ee ay xaaladdooda aadka u sii liidato.
Mr Malpass wuxuu sheegay 100 dal oo ay 70% dadka dunida ugu badan ku nool yihiin in durbadiba la siiyey taageera dhaqaale oo degdeg ah.
Lahaanshaha sawirkaWORLD BANK
"Bangiga Adduunka oo isku dayayo inta karaankiisa dhibka jiro wax ka qabto, haddana dadaalkaasi ma aha mid baahida jirta ku filan" ayuu yiri.Mr Malpass waxaa kale oo uu sheegay cudurka inuu sida oo kale uu calwiyey dadaallada lagu doonayey waddamada saboolka ah in deymaha lagu leeyahay laga cafiyo.
Bangiga Adduunka oo kaashanaya Hay'adda Lacata Adduunka (IMF) ayaa diyaariyey nidaam ay waddamada saboolka ah ay ku dalbanayaan in deymaha ay ku leeyihiin waddamada xubinka ka ah G20 ay ka cafiyaan, ilaa iyo dhammaadka sanadkanna ay codsiyadooda ku soo gudbiyaan.
Madaxa guud ee bangiga JP Morgan, Jamie Dimon wuxuu sheagay cudurka safmarka ee coronovirus uu noo noqdo 'mid aan hurdada kaga toosno' si aan u dhisno bulsho caddaalad ku dhisan.
"Waxaan rajeynayaa inaan musiibadan aan u isticmaalno fursad aan dib ugu dhiseyno dhaqaale abuuri karo fursado joogta ah oo dadka shaqa u abuuri kara, gaar ahaanna kuwa wakhtiga dheer shaqa la'aanta ahaa," ayuu yiri mar uu ka hadlayey shirka saamileyda bangiga ay talaadadi yeesheen.
Hay'adda Lacagta Dunida (IMF)